Umsebenzi kunye nokusetyenziswa kweeBhokisi zeGiya- umthengisi wokuhambisa umbane eSingapore pte ltd
Ukusuka kumthombo wamandla ojikelezayo usiya kwenye isixhobo usebenzisa ii-ratios zegiye, ibhokisi yebhokisi yegiya inikezela nge-torque kunye nokuguqulwa kwesantya. Ingasetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo ezinje ngeebhayisikile ezinyovwayo, oomatshini abazinzileyo, nakweyiphi na indawo ejikelezayo kunye nesantya ekufuneka ilungisiwe. Kodwa, ezimotweni, eyona ndawo ixhaphakileyo kulapho iivili eziqhubayo, ibhokisi yemiyalezo ene-taper bush iguqula imveliso yeenjini zangaphakathi zomlilo. Azinakusetyenziswa kwimisebenzi emininzi njengokumisa okanye ukuqala njengoko ezi njini zifuna ukuqhutywa ngesantya esiphezulu.
Kuyacaca ukuba kufuneka zisetyenziswe ikakhulu ezimotweni njengoko iibhokisi zegiya zisetyenziswa kakhulu kwiimoto. Ziyanda iimoto ezisetyenziswayo kuphuhliso loqoqosho ngenxa yoko, iibhokisi zegiya zidlala indima ebaluleke kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla. Bambalwa kubo abanolwazi ngendlela esebenza ngayo imoto nangona uninzi lwabantu luneemoto, singasathethi ke ngobudlelwane phakathi kwezinto ezahlukeneyo zoomatshini. Kubanini beemoto, Sisigqibo sobulumko ukufunda okuthile malunga neebhokisi zegiya kumthengisi we-taper bush njengoko iibhokisi zegiya zemoto ziyinxalenye esisiseko yokusebenza kwayo.
Kwi-crankshaft ye-injini, i-gearbox iya kudityaniswa ngokubanzi kwiimoto. Kwaye ukuqhuba ukuqhuba kweevili, ukuhanjiswa kokudluliselwa nge-shaft drive kudluliswa ngokwahluka okwahlukileyo. Ukutyhala imoto ukuya phambili, ibhokisi yegiye iguqula isantya senjini kwi-torque. Ngowona msebenzi uphambili kwi-gearbox. Phakathi kweemoto ezizenzekelayo kunye neemoto ezihamba ngesandla, kukho umahluko othile.
Isetyenziswa kwezinye iindawo ezininzi ngaphandle kweemoto, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba iibhokisi zegiya ezivela kumenzi we-taper bush. Kodwa ke nokuba ziphi na apho zisetyenziselwa khona okt umlinganiso wegiya awunakutshintshwa ngexesha lokusetyenziswa, ezi zinto zithunyelwayo zabelana ngento ebalulekileyo. Kungenxa yokuba ngexesha lokumiselwa kusetelwe, umda wegige uzinzile.
Lilonke, kukho ulwazi oluthe kratya malunga nemisebenzi yabo kunye neebhokisi zegiya. Kwiibhokisi zegiya, kuyacetyiswa ukuba kufuneka ube nolwazi olusisiseko. Kubomi bakho bekamva, mhlawumbi iya kuba luncedo.